Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo ka Jawaabtay War dhawaan kasoo yeeray Hay’adda Musaalaxada ee lasafan Dowladda KMG ah. | Halganka Online
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin oo ka Jawaabtay War dhawaan kasoo yeeray Hay’adda Musaalaxada ee lasafan Dowladda KMG ah.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa si kulul uga Jawaabtay war dhawaan kasoo yeeray hay’adii isku tilmaantay Musaalaxada ee sanadkii lasoo dhaafay ku fashilantay in ay isku geyso DKMG ah iyo xoogaga islaamiyiinta.
Waaliga Wilaayada Islaamiga xarakada Shabaabul Mujaahidiin gobalka Banaadir Sheykh Cali Max’med Xuseen Abuu Jabal ayaa sheegay in kuwa culimada sheeganaya ee cambaaraynaya burburinta qabuuraha shirkiyaadka ay yihiin kuwa Khuwana ah oo doonaya in ay dana siyaasadeed ku maldahaan diinta Islaamka.
Sheykh Abuu Jabal wuxuu si gaar ah uga jawaabay hadalk uu maalinimadii Jimcaha Idaacadda BBC-da ka sheegay Sheykh Bashiir Salaad oo sheegto in uu gudoomiye u yahay Hay’adda culimada Somaliyeed.
Shabaabul Mujaahidiin waxay wax lala yaabo ku tilmaantay in Culimadii Dadka ku boorin jirtay la dagaalanka shirkiyaadka ay maanta dana siyaasadeed iyo Koox Jeclaysi u radiyaan ladagaalanka Shirkiyaadka.
“waxaad maqlaysaa kuwa culimo sheeganaya oo dhaleecaynaya ladagaalanka shirkiyaadka shalayna dadka ku boorin jiray in shirkiyaadka laga hor tago, way ogyihiin in ay waajib tahay burburinta qabuuraha shirkiga ah ee waxaa Indha tiray koox jaceyl iyo xasad ay Mujaahidiinta u qabaan”ayuu yiri Abuu jabal.
Sheykh Cali ayaa ugu baaqay culimada tashwiishka ku furaya mujaahidiinta in ay Towbad keenaan oo ay joojiyaan wax ka sheegidda Jihaadka isagoona carrabka ku dhiftay in Mujaahidiintu aysan camalkooda u joojin doonin Wadaad dana gaar ah leh oo Idaacadaha ka hadla.
“Xaqqa cid is hor taagi karta malahan inta ay goori goortahay Towbad keena, Alle ayaan dhamaanteen sugnaan ka baryayanaa, ha isku noqona sidii Balcaan Bin Bacuura idinkoo xaqii og ayaad daah saaraysaan” Cali Jabal.
Dhinaca kale Waaliga ayaa sheegay in ay difaaci doonaan shacabka Barakacayaasha ah ee DKMG ah ku dhibaataysay deegaanka Afisyooni gobalka Banaadir.
Ma ahan markii ugu horaysay oo ay Xoogaga Islaamiyiinta ka hor yimaadaan Culimada DKMG ah u fatwoota ee sanadkii lasoo dhaafay ka cararay magaalada Muqdisho kadib markii ay DKMG ah lasafteen.
« Barakacayaasha Afasyooni “Dowlada waxaan u sheegaynaa Shabaab iyo Xisbul Islaam isma qariyaan waa kuwa banaanada dagaalka u taagay Ordaha oo raadsada oo naga daaya Barakicinta aad nagu haysaan”. Dowlada KMG ah oo sheegtay in Ciidamada AMISOM ay kala qayb qaadan doonaan Howl-gal lagu Burburinayo Guryaha Barakacayaasha Xerada Afasyooni magaalada Muqdisho. »
Munsif, on Maarso 29, 2010 at 11:41 b said:
Waa dhegeysanaayay sh.bashiir . Sida uu uhadlayay waxay uekeed diblumaansi hadalkii